…त्यसपछि यी युवतिको गयो ज्यान « Etajakhabar
…त्यसपछि यी युवतिको गयो ज्यान
न्युजील्याण्डमा एक युवतीले आफ्नो पार्टनसंग क’डा स’म्भोग गर्दा ज्या’न गएको खुलेको छ । त्याँहाकी एक युनिभर्सिटीकी विद्यार्थी समेत रहेकी ग्रेस मिलानी नामकी एक युवतीको क’डा स’म्भोग गर्दा ज्यान गएको खुलेको हो ।
उनको प्रेमीले गाडेको अवस्थामा प्रहरीले ती २१ बर्षिय महिला फेला परेको थियो । प्रेमीलाई अनुसन्धानपछि अदालतमा सुनुवाई हुँदा निधनको कारण ‘क’स्डा स’स्म्भो’ग भनिएको छ । न्यूजिल्यान्डको अकल्यान्डस्थित एक होटलमा क’डा स’म्भो’गप’छि मिलानीको निधन भएपछि युवकले सुटकेशमा राखेर गा’डेको सुनुवाईका क्रममा युवकले बताएका थिए ।
युवकले ह’ ‘त्या’को अभियोग अस्वीकार गरिसके पनि क’डा स’म्भो’ग स’ह’म’ती मानै गरेको बताएका छन् । अकल्यान्डको अदालतमा भएको सुनुवाईका क्रममानिधनको कारण ह’ त्या नभई ‘क डा स म्भोग’ का क्रममा दु’र्घटना भनिएको छ । अदालतले मिलानीका साथीहरुसँग लिइएको बयानमा पनि उनले क’डा स’म्भो’ग’मा चासो राख्ने बताइएको छ । २२ वर्ष पुग्दै गरेकी मिलानीको जन्म दिनको एक दिन अगाडि होटलमा निधन भएको थियो ।
यो पनि : यस कारण पीउनुस् दैनीक तातो पानी : हुर्नुहोस ५ कारणहरु
पानी मानिसको शरिरमा अत्यावश्यक छ । साधरणतया हरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ । पानी प्रशस्तैमात्रामा पीउनाले स्वास्थ्यमा धेरै फाईदा हुने चिकित्सकहरु बताउछन् । तपाईहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ दिनमा तीन गीलास तातोपानी पिउने बानी बसाल्यौ भने पनि शरीर बिरामी हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
हुर्नुहोस दिनमा तीन गीलास तातो पानी खानुका फाइदाहरु
१. तौल कम गराउँछ : तपाईंंको तौल लगातर बढिरह्यो तातो पानीमा कागती मिसाएर लगातार तीन महिनासम्म पिउने गरेमा तपाईंले फरक अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं स्वास्थ राम्रो चाहनुहुन्छ भने खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी खाने गर्नुहोस् ।
२. चिसो हुनबाट बचाउँछ : यदि तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ, छातीको चिसोले सताइरहेको छ भने तातो पानी पिउन लाभदायक हुन्छ । तातो पानी पिउनाले गला पनि ठीक हुन्छ । यसको से’वनले आ’राम मिल्छ ।
३. महिनावारीको दुःखाइ कम गराउँछ : म’हिनावारीको दुः’खाइ प्रायः महिलाहरुको नियमित कामलाई नै रो’किदिन्छ । तातो पानीले यो दुः’खाइलाई कम गर्न सक्छ । यसरी तातो पानीले पेटको दुः’खाइ कम गर्न मद्दत गर्छ ।
४. अनुहारमा कलिलोपना आउँछ : तपाईंको अनुहारको छालाले तपाईंलाई दुः’खी बनाएको छ भने चि’न्ताको नलिनुहोस् । आजैदेखि तातो पानी पिउन सुरुवात गर्नुहोस् केही हप्तामै परिवर्तन देख्नुहुन्छ । छालाका अंगहरु नरम हुनेछ र चमक पनि बढ्नेछ ।
५. पेटलाई दुरुस्त राख्छ : तातो पानी पिउनाले पाचन क्रियालाई सहज बनाउँछ । साथै ग्यासको स’मस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ । खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी पिउने बानी गर्नुस् । यसो गर्नाले खानालाई छिटै पचाउँछ र पेट हल्का हुन्छ ।
यो पनि : ठूला व्यवसायमा महिलाको लगानी बढ्दै
भक्तपुरको पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा महिलाहरुको लगानी बढ्न थालेको छ ।
महिलाहरुले संयुक्त लगानीमा ठूला व्यवसाय शुरु गर्न थालेका छन् । यसको नमूनाको रुपमा आजदेखि मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ राधेराधेमा रु. दुई करोडको संयुक्त लगानीमा ‘मिल मि’ रेस्टुरेन्ट एण्ड बार सञ्चालनमा आएको छ । ‘मिल मि’ को आज पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका नेता महेश बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभयो ।
देशव्यापी रुपमा शाखा विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीक बजारको रुपमा विस्तार भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ राधे राधे क्षेत्रको भाटभटेनी अगाडि सापकोटासहित दुर्गा राई, रमिता कासिछ्वा र भावना खरेलको संयुक्त लगानीमा ‘मिल मि’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रबन्ध निर्देशक सापकोटाले ‘मिल मि’ ले स्वदेशी तथा विदेशी नागकिरलाई विहान ७ देखि राति १० बजेसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पारिवारिक शान्त वातावरणमा सफा, स्वस्थ्यकर, नेपाली, थकाली खाना, नेवारी तथा एशियाका बिभिन्न देशका खाना तथा खाजाका साथै अन्य परिकार पस्कने गरी ‘मिल मि’ सञ्चालनमा ल्याएका छौ, यहाँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र विरामीका लागिसमेत खाजा खानाको व्यबस्था गरेका छौ, केही समय मै होम डेलिभरीको समेत व्यबस्था गर्दैछौं ।”